Buy Apartment For Rent @ Sanchaung (စမ်းချောင်း ၊ ဆီဆုံလမ်း တွင် အလွာနိမ့် အခန်းသန့်လေး ဌားပါမယ်နော် ) (700,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Apartment For Rent @ Sanchaung (စမ်းချောင်း ၊ ဆီဆုံလမ်း တွင် အလွာနိမ့် အခန်းသန့်လေး ဌားပါမယ်နော် )
ရောင်းချသူ: Barani Realestate
Hi , Who is Looking to Rent the Apartment at #Sanchaung Township , I have one room for Rent , it come with Unfurnished ,
Located at #Sanchaung Township , Sizon street ,Room is Located at Corner so Good ventilation
<< Room Size 1815sqft
<< Floor By Teak Parquet
<< Lower Floor
<< 1 Master Bed Room
<<2Single Bed Room
<<3Air Conditioner
<< 1 Washing Machine
<< voltage regulator -1
<< Rental Charges : 700,000Ks (Nego)
If you interested to havealook the properties or want to know another properties in any township , please make me phone call or Contact on cb . Thanks ..
09-777734535 , 09 777733307 & 09-445186639
စမ်းချောင်း ၊ ဆီဆုံလမ်း တွင် အလွာနိမ့် အခန်းသန့်လေး ဌားပါမယ်နော် .. အိပ်ခန်း ၃ခန်းပါပါတယ် … လမ်း လည်း သန့်ပါတယ်နော် လူသွားလမ်းကြားဘေးဖြစ်၍ လေဝင်လေထွက်ကောင်း လည်းကောင်းပါတယ်နော် .
<< အခန်း အကျယ် ၃၃ ပေ ၅၅ ပေ
<< ဘုရားခန်း ၁ ခန်း
<< ဧည့်ခန်း ၂ ခန်း living room 2
<< Master bedroom အိမ်သာ ရေချိုးခန်းပါ ၁ ခန်း
<< Single room ၂ ခန်း
<< Dinning room ၁ ခန်း
<< Aircon ၃ လုံး
<< အဝတ်လျှော်စက် ၁ လုံး, Washing machine - 1
<< မီးအားမြှင့်စက် ,
<< ဌားရမ်းခ : 700,000Ks (ညှီနိူင်း)
ရန်ကုန်မြို့နယ် အသီးသီး ရှိ တိုက်ခန်း Condo ဆိုင်ခန်း များအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09777734535 / 09777733307 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Two Storied House at FMI
TOWNHOUSE thru PAG-IBIG, Availab...
အမည်: Apartment For Rent @ Sanchaung (စမ်းချောင်း ၊ ဆီဆုံလမ်း တွင် အလွာနိမ့် အခန်းသန့်လေး ဌားပါမယ်နော် )